Shisheeyihii Ukraine u yimid inay Ruushka la dagaallamaan oo arrin lama filaan ah la kulmay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Shisheeyihii Ukraine u yimid inay Ruushka la dagaallamaan oo arrin lama filaan...
Shisheeyihii Ukraine u yimid inay Ruushka la dagaallamaan oo arrin lama filaan ah la kulmay
(Hadalsame) 11 Abriil 2022 – Hay’adda qorta Dagaalyahannada Caalamiga ah ee Ukraine ee ‘International Legion’ ayaa hadda kaddib doonayn in qortaan dagaalyahanno ajnabi ah si ay ula dagaallamaan Ruushka, sida uu sheegay afhayeen la hadlay National Post oo laga leeyahay Canada.
Inkasta oo ay Kiev mar gacmo furan kusoo dhaweeysey dagaalyahannada reer Galbeedka hadda waxaa la ogaadey in sahaydu yar tahay, islamarkaana aysan dadkani khibrad dagaal oo ku filan lahayn si ay markiiba u galaan dagaalka.
Mutadawiciintii horay safarka u soo galay ayaa ka sheekeeyey qisooyin naxdin leh oo ah in jiidaha hore loo diray iyaga oo aan hubaysnayn oo aan tababar la’aan ah. Weerarkii Ruushka kaddib, waxaa muuqaallo online ah lagu arkay dad sheeganaya inay ku biireen dagaalka ka dhanka ah ciidamada Moscow, laakiin aan la siinin wax hub ah iyo rasaas ah oo ay ka helaan dhanka Ukraine.
Maalmo gudahood markii uu Ruushku weeraray dalkaasi, Kiev waxa ay ballanqaaday bixinta fiiseyaal bilaash ah oo la siinayey ajaanibta doonaysa in ay hubka qaataan oo wajahaan Ciidamada Moscow. Reer Galbeedku waxay marka horeba ku soo geli karaan fiise 90 maalmood ah, iyagoo wata baasaboor caadi ah.
“Waxaa jira sababo badan (oo loo joojinayo qoritaanka) iyadoo mid ka mid ah uu yahay hub la’aanta,” ayuu yiri afhayeenka Boris Wrzesnewskyj, oo ah xildhibaan hore oo Canadian ah kaasoo caawinayey codsadayaasha doonayey inay Ukraine ka dagaallamaan, isagoo u sheegay wargayska in dadkani aanay khibrad lahayn sidaa darteed in la qoro aysan wax faa’iido ah u lahayn safka hore ee dagaalka.
Ruushka ayaa sidoo kale dabayaaqaddii bishii hore sheegtay inay laayeen “ugu yaraan illaa 180 calooshood u shaqeystayaal ajnabi ah oo ku sugnaa goob lagu tababarayey kaddib markii ay duqeeyeen tuulada Starichi ee ka tisan Yavoriv.” sida uu sheegay Igor Konashenkov oo u hadlay Wasaaradda Gaashaandhigga Ruushanka.
Previous article”Waxaa nalaka qaaday telefoonnadii kaddibna laaluush laba-laab ah ayaa nala waydiiyey!” – Safaaradda Somalia ee Nairobi oo laga sheegtay
Next articleYAAB: Ruushka oo u baahday gantaal uu sameeyo dal Muslim ah oo uu qaab tahriibin ah ku helayo